‘के हो महेन्द्रपथ ? मलाई राजा बनाउँछन् कि क्या हो !’ – YesKathmandu.com
काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पाँच विकास क्षेत्रलाई नै संघियतामा रुपान्तरण गरे कुनै पाप कर्म नहुँने बताएका छन् । आइतवार विहान एक सञ्चारमाध्यमसँग कुरा गर्दै उनले पाँच विकास क्षेत्र हिमाल पहाड र तराई मिलेर बनेको भन्दै त्यसलाई पनि संघियताको एउटा आधार मान्न सकिने बताए । ‘पाँच विकास क्षेत्रलाई प्रदेश बनाउँदा कुनै पाप कर्म हुँदैन, वरु जनताको सम्मान हुन्छ भन्ने एउटा तर्क उठेको छ’, ओलीले भने ।
एमाले अध्यक्ष ओली महेन्द्रपथमा गएको आरोप मधेसी मोर्चा र माओवादी केन्द्रका नेताहरुले लगाइरहेका बेला ओलीले महेन्द्रपथको अर्थ खुलाउन चुनौति दिएका छन् । ‘के हो महेन्द्रपथ ? मलाई राजा बनाउँछन् कि क्या हो ?’ ओलीले मधेसी मोर्चा र माओवादी केन्द्रलाई झटारो हान्दै भने ‘बिखण्डनकारीका सोचसँग हाम्रो सोच मिल्दैन, लोकतन्त्रीक गणतन्त्र, विधिको शासन, राष्टिय अखण्डतामा कुनै सम्झौता हुँदैन ।’
ओलीले लोकतन्त्रमा जनताको आवाज सवैभन्दा बलियो भएका कारण जनताको आवाज सुन्नु पर्ने बताए । ‘जनता के चाहान्छन् त्यसको मतलव छैन, आफ्नो स्वार्थका लागि लड्नेसँग सम्झौता हुँदैन’, उनले भने । बर्तमान सरकार जनताको चाहाना भन्दा स्वार्थी समुहको लहलहमा लागेको आरोप समेत उनले लगाए ।
एमालेलाई मधेस क्षेत्रमा कार्यक्रम नै गर्न नदिने मधेसी मोर्चाको हुँकारलाई ओलीले चुनौति दिएका छन् । ‘अरुलाई नश्लवादको आरोप लगाउने तर क्रियाकलाप नश्लवादको गर्ने मधेसी मोर्चालाई एमाले कार्यक्रम रोकेर देखाउन’ चुनौति दिएका छन् । एमालेसँग जनताको मत लिन निर्वाचनमा आउन ओलीले खुल्ला चुनौति समेत दिएका छन् ।
कठै ! गृहमन्त्रालयका सहसचिव,जस्लाई क्यालेण्डर समेत हेर्न आउदैन
कांग्रेस महाधिबेन एक सातापछि सार्ने तयारी